निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन गर्नेलाई विशेष छुट दिइने भन्नू हुन्छ :अर्थमन्त्री…हेर्नुस् !::Point Nepal
निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन गर्नेलाई विशेष छुट दिइने भन्नू हुन्छ :अर्थमन्त्री…हेर्नुस् !
काठमाडौँ, ११ माघ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने कम्पनी तथा व्यवसायीलाई सरकारले विशेष छुटहरु उपलब्ध गराउने बताउनुभएको छ ।
नेपाल समुन्द्रपार निकासी–पैठारी सङ्घको ४०औँ वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री खतिवडाले मुलुकमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सेवा तथा वस्तु निर्यात गर्ने संस्थालाई विदेशी मुद्रामा सहुलियत पुर्नकर्जाको व्यवस्था र सुविधा दिने बताउनुभयो ।
भन्सार करका विषयलाई सरलीकरण गर्न छिट्टै बोर्ड गठन गरिने बताउँदै उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट बोर्ड गठनको विषय पारित भएको बताउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मोदीलाल दुगडले व्यवसायीको सहजताका लागि उद्योग दर्ता गर्ने सन्दर्भमा अनलाइनबाट दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उद्योगसँग सम्बन्धित सबै काम अनलाइनबाटै सेवा प्रवाह गरिने बताउनुभयो ।